Tilmaamaha Safarka Xalaasha ee Yogyakarta - Makhaayadaha - Masaajidada - Hotels Friendly Hotels
Yogyakarta waa magaalo buuq badan oo ay ku nool yihiin ilaa 500,000 oo qof waana meesha ugu caansan ee loo dalxiis tago ee Java, taas oo ay ugu wacan tahay u dhowaanshaha macbudyada Borobudur iyo Prambanan. Magaaladu waa Xarunta Farshaxanka iyo Waxbarashada, waxay bixisaa dukaameysi wanaagsan waxayna leedahay goobo dalxiis oo ballaaran.
Magaalada (kota) ee Yogyakarta waa mid ka mid ah shanta degmo ee ka tirsan ismaamulka Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), "Gobolka Gaarka ah ee Yogyakarta". Degmooyinka kale waa maamul goboleedyada:
Sleman oo ku yaal geedaha dabka kulul ee Merapi waqooyiga
Bantul ilaa badda ilaa koonfurta
Buuraha Gunungkidul dhanka bari
Meelaha hoose ee Kulon Progo Galbeed
Maqaamkan gaarka ah waxaa mahad iska leh Saldanada Hamengkubuwono, kaas oo xukumayay aagga ilaa 1749 isla markaana ku hogaamiyay gobolka marxaladihii adkaa ee qabsashada iyo kacaankii. Intii lagu guda jiray dagaalkii gobanimadoonka ee Indooniisiya, Sultan Hamengkubuwono IX wuxuu u soo bandhigay dawlada cusub ee Indooniisiya magaalo madaxdeeda. Yogyakarta waxay noqotay caasimadii kacaanka ee jamhuuriyada intii u dhaxeysay 1946 ilaa 1949 markaas oo Jakarta ay wali qabsadeen Holland. Natiijo ahaan, Indooniisiya-madax-bannaanida cusub waxay u magacowday Suldaanka inuu noqdo guddoomiyaha gobolka DIY - kan keliya ee Indonesia oo aan dadku toos u dooran. Dowlada dhexe ee Indooniisiya ayaa isku dayday inay wiiqdo awooda suldaanka iyadoo ku baaqday in si toos ah loo doorto gudoomiyaha. Suldaanka hada, Hamengkubuwono X, waxaa ku doortay aqlabiyad aad u tiro badan.
Yogyakarta waxay ku taal mid ka mid ah qaybaha ugu firfircoon ee Java waxayna marar badan ku dhufatay dhulgariirro iyo qaraxyo fulkaano. Waxa ugu xumaa muddooyinkii ugu dambeeyay dhulgariirkii 27kii Maajo 2006, kaas oo ay ku dhinteen in ka badan 6,000 oo qof, kuna burburay in ka badan 300,000 oo guri. Dhulgariirku wuxuu ahaa 25 km (16 mi) koonfurta magaalada, taas oo ka fogaatay dhulgariirkii ugu xumaa. Dadaal la yaab leh oo wax ku ool ah oo ka soo kabashada masiibada ayaa si degdeg ah u dayactiray inta badan dhaawaca jirka.
Yogyakarta waxaa ka buuxa dalxiisayaal gudaha ah inta lagu jiro fasaxyada iskuulka, basaska dalxiiskuna waxay ku yaalliin meelaha booqdayaasha ah ee ku yaal wadada wax iibsiga ee Jl Malioboro iyo fagaaraha qasriga waqooyiga, ama alun-alun, oo ku xayiran taraafikada culus. Gawaarida, baarkinka iyo waratada ayaa gacan ka geysta ciriiriga taraafikada.
Waxaa jira seddex xafiis oo warfaafinta ah, mid garoonka diyaaradaha ah, midna saldhigga weyn ee tareenka, kanna kan ugu weyn:
Xafiiska macluumaadka dalxiiska, Jl Malioboro No.16 (Ku xigta Hoteelka Mutiara). M – Th 07: 30–20: 00, F – Sa 07: 30–19: 30. Waxay leedahay khariidado ku qoran Ingiriisi waxayna ku siin karaan macluumaad waxtar leh. (la cusbooneysiiyay Agoosto 2020)
4 Maalmood Raaxo Yogyakarta Xalaal Dalxiis
Safarka Xalaasha Gaarka ah
Maaddaama ay habeenka tahay, Yogyakarta waxay noqotaa gabbaad raashin raashin jidad raqiis ah oo qanciya leh iyadoo waratada ay dhisayaan meheraddo macaamiishooduna u soo baxayaan iyagoo raadinaya cuntooyinka waqtiga la sharfo.
Hoteelka Brongto Yogyakarta
Hotelka Grand Aston Yogyakarta
Hoteelka Jentra Yogyakarta
Hoteelka Santika Premiere Jogja Yogyakarta
Innaa Garuda Yogyakarta
Huteelka Royal Ambarrukmo Yogyakarta
Hoteelka Cangkringan Spa & Villas Yogyakarta
eHalal Safarka Mart > Safarka Xalaasha ee Indonesia > Hagaha Socdaalka Xalaasha ee Yogyakarta
Hagaha Mae Hong Son Xalaal